Joan Laporta Oo Sheegay Tilaabo Uu Qaadayo Ka Hor Inta Uusan La Kulmin... - Wararka Maanta
Home/Warka Ciyaaraha/Joan Laporta oo sheegay tilaabo uu qaadayo ka hor inta uusan la kulmin…
Joan Laporta oo sheegay tilaabo uu qaadayo ka hor inta uusan la kulmin…
Madaxweynaha cusub ee Barcelona Joan Laporta ayaa lagu soo waramayaa inuu dib u eegi doono xisaabaadka kooxda ka hor inta uusan la kulmin Lionel Messi si uu ugala hadlo mustaqbalka xiddiga reer Argentina.
Heshiiska haatan ee Messi ee Camp Nou ayaa dhacaya dhamaadka bisha June, waxaana la sheegayaa in Manchester City ay ka go’an tahay inay keento Etihad Stadium ololaha 2021-22.
Weeraryahanka ayaa loo maleynayaa inuu haatan u furan yahay fikradda ah inuu heshiis cusub qalinka ugu duugo kooxda Ronald Koeman , in kastoo Laporta la sheegayo inuu wadahadallo ciriiri ah la yeelan doono xiddiga kooxda ka hor dhammaadka bisha.
Sida laga soo xigtay Marca , madaxweynaha cusub ayaa doonaya inuu dib u eego xisaabaadka qaldan ee Barca ka hor inta uusan la kulmin Messi iyo aabihiis wadahadalada qandaraaska.
Xidiga South America ayaa lagu soo waramayaa inuu doonayo in kooxda reer Catalonia ay damaanad qaado inay ka howlgeli doonaan suuqa kala iibsiga ee soo socda madaama uu kaliya doonayo inuu ballan qaado hadii kooxda ay awood u leedahay inay ku guuleysato koobab waa weyn.
Messi ayaa dhaliyay 25 gool iyo 11 caawiyey 35 kulan oo uu saftay heer kooxda xilli ciyaareedkan.
hor inta Joan kulmin Laporta qaadayo sheegay tilaabo uusan